www.camaloow.com - News: Dowladda Soomaaliya, ayaa markii ugu Horreysay ka Mamnuucday in gudaha dalka laga akhristo ama laga daalacdo qaar ka mid ah Shabakadaha Internet-ka ee Soomaaliga wax ku qora.
December 10 2018 12:24:48
Dowladda Soomaaliya, ayaa markii ugu Horreysay ka Mamnuucday in gudaha dalka laga akhristo ama laga daalacdo qaar ka mid ah Shabakadaha Internet-ka ee Soomaaliga wax ku qora.
Amar kasoo baxay Xafiiska Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka, Dr. Axmed Cali Daahir ayaa lagu Mamnuucay in gudaha Somalia laga akhristo 35 Website oo ay Dowladda Somalia ku eedeysay inay tabiyaan warar intooda badan loog talo-galay in dadka lagu jah-wareerinayo.
Website-yadaan la xanibay ayaa haddii la furo waxay kuusoo saarayaan qoraal Ruuxii furta loogu shieegayo in Shabakadaan la xadiday, Waana markii ugu horreysay oo ay Dowladda Somalia xayiraad saarto shabakado laga akhristo gudaha dalka.
Ugu dambeyn, Tallaabadan ayaa waxay imaanaysaa kaddib markii bishii November,2015-kii ay Dowladda Federaalka Somalia ku dhawaaqday inay xannibaado saarayso 35 ka mid ah Shakahadaha ama Website-yada wax ku tabiya Afka Soomaaliga
· news on February 20 2016 · 0 Comments · 23868 Reads ·
Render time: 0.01 seconds 28,908,584 unique visits